बच्चाहरु र किशोरहरुको लागि पावर डोनरको रूपमा उचित पोषण
तपाई कति पटक खाईनुहुन्छ र उचित आहारको लागि कति?
मीठो अतिरिक्त अनुमति छ
एक उचित आहार को लागि स्वस्थ मिश्रण मा मुख्य रूप देखि जनावर र रोपण खाद्य पदार्थ को संतुलित संरचना हो। इष्टतम ऊर्जा उत्पादन ठूलो मात्रा मा कार्बोहाइड्रेट (50-55 प्रतिशत) बाट बनाइएको छ जस्तै अनाज, सब्जियां, आलु र फल।
वनस्पति वसा र तेलबाट मात्र फैट (अधिकतम 30 प्रतिशत) को एक सानो अनुपात र पशु र सब्जी प्रोटीनको एक सानो अनुपात (10-15 प्रतिशत) आवश्यक छ।
यदि एक प्राकृतिक सन्तुलन यहाँ प्राप्त भएको छ भने, बच्चा राम्रो तरिकाले हेरिएको छ र कुनै पनि पूरक आवश्यकता पर्दैन।
कुपोषण कसरी चिन्न सकिन्छ?
बच्चाले एक-तरटरमा खानेकुरा, जस्तै शुद्ध रूपमा शाकाहारी, धेरै दूधको साथ, मिठाइ र पेस्ट्रीहरू वा प्रायः मिठाइको साथमा, फ्याट एसिडको कमी, तत्वहरू र भिटामिनहरू ट्रेस गर्न सक्छन्।
यदि मुख्यतः एक स्वाद मनपर्दो छ भने, उदाहरणका लागि नमकीन, मीठो, खट्टा, यसले प्राकृतिक स्वाद संवेदनालाई छोप्छ। त्यसकारण, बच्चाहरूलाई कम से कम कुनै पनि खानाबाट नाक खाएर प्रयोग गर्न महत्त्वपूर्ण छ।
एक स्वस्थ र इष्टतम आहारले दिनभरि 3-5 mealtimes सुनिश्चित गर्दछ। कम से कम एक गर्म भोजन समावेश गर्नु पर्छ। खैर, पेटले पनि भोक गर्दैन भने पेट लाग्छ।
स्न्याक्सको रूपमा, तपाईं फलफूल र सब्जियां, केहि रोटी वा पेस्ट्रीको आनन्द उठाउन सक्नुहुन्छ। तातो भोजन आलु, खैरो चावल, पास्ता, सब्जिहरु वा सलादको लागि सिफारिस गरिन्छ। वैकल्पिक रूप मा सानो माछा र मासु पक्ष को व्यंजन प्रदान गर्दछ। पिउनको रूपमा, अझै पानी, फल र हर्बल चाय सस्तो छ। पेयको शिरबाट बचाउन सकिन्छ, जस्तै फलको रसले पहिले नै 10 प्रतिशतको चीनी सामग्री समावेश गर्दछ।
दूधको यस्तो महत्त्वपूर्ण सामग्री जस्तै कि। क्याल्सियम, फास्फोरस, प्रोटीन, जस्ता, आयोडिन र भिटामिन B2 र B1 को रूपमा, जो विकास चरणमा विशेष रूपमा महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। यदि त्यहाँ दूध एलर्जी हुन्छ भने, पोषण विशेषज्ञलाई सल्लाह दिनुहोस्।
बच्चाहरु को लागि भिटामिन
भोजन प्रकृति को एक मामला हो
प्रायः वयस्कहरूले आफ्नो बच्चाको खानाको खातिर उनीहरूको आफ्नै खाने बानीको मापन गर्छन्। त्यसैले यो हेरचाह गर्नुपर्नेछ बच्चाहरूलाई वयस्क अंश नदिनुहोस्।
शरीर सामान्यतया यसको आवश्यकता हुन्छ। यो सामान्य छ कि बच्चाहरु हरेक दिन खाँदैनन्। उमेरको आधारमा, शरीरको प्रकार, शरीर र शारीरिक गतिविधि, आहारलाई व्यक्तिगत रूपमा समायोजन गर्नुपर्छ।
शान्त र पतित बच्चाहरु मासु र चिसोको ठूलो मात्रा संग अभिभूत गरिनेछ, तर यसको सट्टा हल्का खाना चाहिन्छ, किनकि तिनीहरूको चयापचय यो राम्रो गर्न सक्छ। पूर्व-पकाएको सब्जिहरु र न्यानो खाना सबै दिन सबै भन्दा कम मात्रा मा वितरित गरिन्छ।
नियमले आनन्द उठाउन सक्छ
तपाईंको पेट राम्रो महसुस गर्न केहि सरल खाना अनुष्ठान महत्त्वपूर्ण छन्। किनकी पहिलो स्वस्थमा एक स्वस्थ पाचन सुरु हुन्छ। खानेको लागि हामी सबैको माथि र आरामको आवश्यकता छ। यसकारण भोजन भन्दा अघि र पछि एक सानो ब्रेक महत्त्वपूर्ण छ। रेडियो, टिभि, पढाई वा उत्साहित वार्तालापको रूपमा भेदभावबाट टाढा बस्नुपर्छ। र ठूला व्यक्तिहरू जस्तै: "आँखा तिम्रो साथ खाईन्छ।"
मीठा स्वाद को लागि प्राथमिकता शायद नैतिक छ, किनकी आमाको दूध पनि मीठो स्वाद छ।
कुल मिठाईलाई लागू गर्न गाह्रो हुनेछ। यहाँ सम्म कि खाद्य पिरामिडले "एक्स्ट्रास", बर्खास्त खाद्य पदार्थहरूको एक समूह शीर्षक अन्तर्गत एक स्थानलाई दिएको छ।
सिद्धान्तमा मिठाईहरू निषेधित गरिएको छैन। तथापि, बाल पोषणका लागि अनुसन्धान संस्थान (एफकेई) सिफारिस गर्दछ कि तपाईंले "एक्स्ट्रा" को रूपमा दैनिक ऊर्जाको सेवनको 10 प्रतिशत भन्दा बढी लिनुहुन्न। उदाहरणका लागि, 7-9-वर्ष-उमेरका बच्चाहरुका लागी, यी 180 क्याल्कल वा चिनोको 45 ग्राम वा वोसो को 20 ग्राम बारेमा।